ပင်မစာမျက်နှာကျန်းမာရေးအချက်အလက်နို၀င်ဘာလ 2019ကင်ဆာအပေါ်စိတ်ထား : အကောင်းမြင်အတွေးအခေါ်သည် သင့်အား စိတ်လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစေခြင်း
նոյեմբերի 22, 2019 CancerExcellenceMadePossibleHorizonCancer
“အကောင်းမြင်တွေးခေါ်ခြင်း၊ သင့်အပေါ် ဖိအားအလွန်မပေးခြင်း၊ သင့်တွင်ကင်ဆာမရှိကြောင်း အမြဲယုံကြည်ခြင်း၊ ပုံမှန်ကဲ့သို့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်ခြင်း ဒါတွေကတော့ ကင်ဆာကုသရေးမှာ အဓိကသော့ချက် ဖြစ်ပါတယ်” ၄င်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ တက္ကသိုလ်ကထိကဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်သူ တင်မေလွင်မှ Horizon ကင်ဆာကုသရေးစင်တာတွင် ကင်ဆာကုသရေးကို မည်ကဲ့သို့ ချဉ်းကပ်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်း ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုအပြည့်ဖြင့် ပြောစကား ဖြစ်ပါသည်။
တင်မေလွင်သည် သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်၌ ထူးထူးဆန်းဆန်းတစ်ခုခု ဖြစ်ပျက်နေသည်ကို စတင်ခံစားခဲ့ချိန်တွင် ရန်ကုန်ကွန်ပြူတာ တက္ကသိုလ် (UCSY) ၌ ၂၀ဝ၈ ခုနှစ်အထိ တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ အစပိုင်း၌ သူမ၏ရင်သားဘေးတွင် အကြိတ်အခဲတစ်ခုရှိသည်ဟု သာမန် ထင်ခဲ့သည်။ ပထမတွင် ၄င်းသည် ကြီးထွားလာခြင်းမရှိဘဲ ပျောက်ကင်းသွားသည်ဟု ထင်ရသည်။ သို့သော်လည်း တစ်နှစ်ကြာခန့် ပေါ်လာလိုက် ပျောက်သွားလိုက် ဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် သူမ၏ ဆရာဝန် သူငယ်ချင်းမှ ကျန်းမာရေး အသေးစိတ်စစ်ဆေးရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ သူမတွင် ရင်သားကင်ဆာရှိကြောင်း စစ်ဆေး တွေ့ရှိရသည်။
၄င်းသည် သူမအတွက် အဓိက စိတ်တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည် တက္ကသိုလ်ရာထူးကို စွန့်လွှတ်လိမ့်မည်ဟု အလွယ်တကူ ယူဆနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း သူမအတွက် လုံးဝ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ သူမတွင် လုံးဝ ဖျားနာခြင်း မရှိကြောင်း သူမ ယုံကြည်သည်။ “ဟုတ်ပါတယ် ရင်သားကအခဲနဲ့ နို့သီးခေါင်းကြောင့် ကျမမှာ တစ်ခုခု မှားနေကြောင်း ကျမ သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ဆုံး ကျမမှာ ရင်သားကင်ဆာရှိကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိတဲ့အခါ ကျမ ဘယ်လိုမှ မခံစားရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ထူးဆန်းမှုတွေအားလုံး အံ့အားသင့်ပါတယ်။” ဟု သူမ၏ အကောင်းမြင်အတွေးအခေါ်ကို ပြောပြပါသည်။ “ကျမ ဖျားနာတယ်လို့ ဘယ်တော့မှ မထင်ခဲ့ပါဘူး။ ကျမဟာ အတွေ့အကြုံအသစ်အဆန်းတွေနဲ့ ပိုအံ့အားသင့်ခဲ့ပါတယ်။ “ကျမ ဖျားနေတယ် ကျမမှာ ကင်ဆာရှိတယ်” လို့ တွေးပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖိအား မပေးခဲ့ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရောဂါပျောက်လိမ့်မယ်လို့ ကျမ ကောင်းကောင်း သိတယ်”
“ကျမရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက ကျမကို ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကုသသင့်တယ်လို့ ပြောခဲ့လို့ ကျမ ချက်ချင်းဆိုသလို ပိုစိတ်သက်သာစေပါတယ်။ ကျမ Bumrungrad ရဲ့ ဂုဏ်သတင်းကို ကြားဘူးပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အဲဒါအတွက် ဘာမှ စိုးရိမ်စရာ မလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျမကို ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဆေးကုသရေးအတွက် တကယ်စိတ်လှုပ်ရှားစေတာကတော့ ဘန်ကောက်မှာ ဈေးဝယ်ထွက်ခွင့် ရတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမ ဒီဘန်ကောက်မြို့ကို ကြိုက်တယ်! ကျမ ဒီမှာ ဈေးဝယ်ရတာ ကြိုက်တယ်”
သူမ၏စိတ်သည် ဘာမှမဖြစ်သော်လည်း သူမ၏ကုသရေးသည် စိန်ခေါ်မှု ကင်းမဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုမှာ ကင်ဆာသည် သူမ၏ အရိုးများသို့ အလျှင်အမြန် ပြန့်နှံ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သူမ၏ ကင်ဆာကုသရေးဆရာဝန် Dr. Vinai Ariyaprakai မှ သူမ မမျှော်လင့်ခဲ့သောအရာကို ပြောပြသည်။ “Dr. Vinai က ကျမကိုပြောတယ် ကင်ဆာက ကျမရဲ့ lymph nodes နဲ့ အရိုးတွေကို ပြန့်နှံ့နေပြီတဲ့။ ဆရာဝန်က ကျမ ၆ လဘဲ နေရတော့မယ်တဲ့။ ကျမ ဆေးရုံတက်ရမယ် ကျမ အတော် စိတ်တုန်လှုပ်သွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျမ လုံးဝ မကြောက်ပါဘူး။ ကျမရဲ့ ဂါထာကတော့ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒါကိုကျော်ဖြတ်သွားနိုင်လိမ့်မယ် ဆိုတာဘဲ”​
သာတဲ့အခါရှိသလို နာတဲ့အခါလည်း ရှိနိုင်ခြင်း
“ကျမရဲ့ကုသစောင့်ရှောက်မှုက ချောချောမွေ့မွေ့ ရှိခဲ့ပါတယ်။ တကယ်ကို ကျွမ်းကျင်မှု ရှိကြပါတယ်။ သူနာပြုတွေက ကျမကိုပြုစုပုံ စကားပြန်ရဲ့ထိထိရောက်ရောက် စကားပြန်ပေးပုံတွေက အကူအညီကောင်းပေးသူတွေရဲ့လက်ထဲမှာ ကျမ ရောက်နေတယ်လို့ ကျမ ခံစားရတယ်” ဟု တင်မေလွင်မှ ပြန်ပြောပြသည်။ ကုသရေးကို ဓာတုကုထုံး ၃ ကြိမ်နဲ့ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ အသားပိုကုသရေးပါရဂူက ခွဲစိတ်ကုသမှု အဆင်ပြေချောမွေ့မှုရှိစေရန် ဓာတုကုသရေးပစ္စည်းကို ၃ ကြိမ်ပြောင်းလဲခဲ့ရပါတယ်။ “ကျမ ကုသရေးမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အခိုင်အမာ ကတိပြုဖို့ ဆရာဝန်တွေကို အပြည့်အဝ ယုံကြည်ချက်ရှိဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာဝန်က ကျမရဲ့ ကင်ဆာအကျိတ်ကို အောင်မြင်စွာ ခွဲထုတ်နိုင်ပြီး ရောင်ခြည်ကုထုံးက မျှော်လင့်ထားသလို ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း အရေပြားအစားထိုးကုသရေးလုပ်ဖို့ လိုအပ်နေပါသေးတယ်။ သူတို့က ကျမရဲ့ နောက်ကျောအပေါ်ပိုင်းက အရေပြား ထုတ်ယူခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါ မအောင်မြင်တော့ ကျမရဲ့ဗိုက်ကအရေပြားကို အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ အရေပြား အစားထိုးကုသရေး ပြုလုပ်ရာမှာ ကျမရဲ့ အခြားတဖက်ရင်သား ခွဲထုတ်မှုနဲ့ အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။”
စိတ်ဖိစီးမှု သို့မဟုတ် မိမိအပေါ်မိမိ မလိုအပ်သော ဖိအားပေးမှုမရှိဘဲ စိတ်ဓာတ်မြင့်မားစွာထားရှိခြင်း ကုသရေးအပေါ် အခိုင်အမာ ကတိထားရှိခြင်းတို့သည် တင်မေလွင်၏ ကုသရေးအောင်မြင်မှုအပေါ် အလွန်အကျိုးရှိစေသည်။ “ကျမတို့ရဲ့စိတ်အခြေအနေက ကုသရေးမှာ အလွန်ဘဲ အရေးကြီးတယ်လို့ ကျမ ခံစားရတယ်။ ကုသလို့ ရလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ရင် ကျမတို့ ကုသလို့ ရလိမ့်မယ်။ ကျမပြောတာ ယုံကြည်ပါ။ ကုသလို့ မရဘူးလို့ သင် ထင်ရင် သင် ကုသလို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး” ဟု သူမ၏ ရယ်ရယ်မောမော ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း အမူအရာဖြင့် သူမ ပြောပြသည်။ ​
“ကျမ ဘဝကို ပျော်ပျော်ပါးပါး နေတယ်။ ကျမ နှလုံးရောဂါနဲ့ ဆီးချိုရောဂါတို့ကြောင့် ကျမ ခံစားခဲ့ရတုန်းကလည်း ကျမရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေ အဆုံးရှုံး မခံခဲ့ပါဘူး။​ ကျမဟာ ဆေးရုံမှ ကုသမှု ခံယူနေပေမဲ့လဲ သူနာပြုတွေကို ဆေးရုံအနီးမှာ ကျမကို ဈေးဝယ်ထွက်ခွင့် တောင်းခံချင်ပါတယ်။”
တင်မေလွင်သည် အခြားလူနာများအား ပြောလိုသည်မှာ : ကင်ဆာက သင့်ကို မပိုင်ဆိုင်ပါစေနဲ့။ ကင်ဆာက အဲဒီမှာရှိနေတယ် ဆိုတဲ့အချက်ကို ကိုင်တွယ်လက်ခံပါ။ ပြီးရင် အဲဒါကို လုံးဝ ထုတ်ပယ်ပစ်ပါ။ အဲဒီနောက် ဆရာဝန်ပြောသလို တိတိကျကျ လုပ်ပါ။ တခြား မတွေးပါနဲ့။ တင်မေလွင်သည် ဥရောပနိုင်ငံမှ ဈေးဝယ်ပြန်လာခဲ့ကြောင်း အသိပေးမပြောကြားမီ သူမ၏မျက်နှာတွင် ဤလျှို့ဝှက်ချက်ကို တိုးတိုးတိတ်တိတ်အပြုံးဖြင့် အင်တာဗျူးထံမှ ထွက်ခွါသွားခဲ့သည်။